နက္ခတ်ဗေဒင်မှတ်စုများ: ဆက်စပ်မှု ရာခိုင်နှုန်းများအရ ...
ဆက်စပ်မှု ရာခိုင်နှုန်းများအရ ...
မွေးနေ့အမှတ်တရ ကုသိုလ်ယူဟောပြောခဲ့သော ဇာတာများထဲမှ ကာယကံရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လေ့လာဖွယ်ဇာတာများကို ရွေးကောက်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ ၂၀ ခန့်ကိုဖြေကြားခဲ့ရာတွင် ပထမဦးစွာ မေးမြန်းခဲ့သူများကို မေးခွန်းအပြင် အခြားအကျိုးရှိဖွယ်များကိုပါ ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှ မေးမြန်းသူများကိုမူ လိုရင်းမျှသာ ဖြေကြားနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် တောင်းပန်လိုပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ စာမေးပွဲတွင်းဖြစ်လို့နေပြန်ပါသည်။
အောက်ပါဇာတာအတွက် အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်အတိုင်း တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်အသုံးပြုထားသော MOTAA သင်တန်းမှ အယူအဆများကို လက်လှမ်းမီသလောက် ထည့်သွင်းထပ်ဆောင်းဝေဖန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်စပ်မှုရာခိုင်နှုန်းများအရ လဂ်ရာသီ အင်သာ အရေးကြီးပုံကို အထူးပြုတင်ပြသွားပါမည်။
ဇာတာရှင်ထံမှ အကြောင်းပြန်စာကိုလည်း သူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အောက်တွင်ပူးတွဲဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျွန်တော်ဟောပြောထားသည်များကို ထိုဇာတာရှင်မှ ရက်စွဲနှင့်တကွ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြထားပါသည်။
အထက်ပါဇယားကွက် ဇာတာမျိုးကို ဤဘလော့မှာ ကျွန်တော်တင်ထားသော ပရိုဂရမ်ငယ်ဖြင့် တွက်ယူနိုင်ပါသည်။ တသီးတခြားစီတွက်ယူထုတ်ယူရသော လဂ်အဟော လဂ်စီးန၀င်း လက်စီးနက္ခတ်၊ စန်းရပ်(ဇမန)ရာသီအဟော၊ စန်းယှဉ်နက္ခတ်၊ စန်းစီးနက္ခတ် စသည့် ဂြိုဟ်တစ်လုံးတွင် မူတည်ဟောပြောမှုမျိုးကို အသုံးမပြုလိုပါသဖြင့် ခြုံယူအဖြေထုတ်ရန်သာ ကြိုးစားတင်ပြသွားပါမည်။
အဘယ်ကြောင့် ဥစ္စဗလ၊ ဒဿဝဂ္ဂ၊ အဌ၀ဂ္ဂများကို မသုံးသနည်းဟူမူ
ဗေဒင်ကျမ်းများတွင် ပါဝင်သည့်အတိုင်း ဥစ္စဗလ၊ ဒဿဝဂ္ဂ၊ အဌ၀ဂ္ဂများနှင့်တကွ သုဒ္ဒဂြဟကိုပါ တွက်ချက်ပေးထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်ပါအားနည်းချက်များကြောင့် ထိုအားများကို အသုံးမပြုသင့်ဟု ယူဆမိပါသည်။
(၁) ဥစ္စဗလသည် ဂြိုဟ်တစ်လုံး၏ မူလဥစ်အံသာမှ တည်ရာကို မူတည်တွက်သဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်မျှပြောင်းလဲမည်ကို ဂရုပြုရန်လိုလာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တနင်္ဂနွေနေမင်းသည် တစ်ရက်အတွင်း ၁ အင်သာ(ဒီဂရီ) သာအရွေ့ရှိသဖြင့် ထိုနေ့မွေးသူများအပြင် ထိုသီတင်းပတ်အတွင်း မွေးသူများသည်ပါ ဥစ္စဗလ % သိသာကွဲပြားမည်မဟုတ်ပေ။ အမြန်ဆုံးသွားသော တနင်္လာဂြိုဟ်သည်ပင် ၂ ရက်ခွဲအချိန်အတွင်း ၃၀ ဒီဂရီသာသွားလေသည်။ ထိုနှစ်ရက်ခွဲအတွင်းမွေးသူများ၏ တနင်္လာဥစ္စဗလသည် ၃၀ ဒီဂရီသာ အများဆုံးကွာမည်။ ကွာဝေးနိုင်သော အတိုင်းအတာမှာ ၁၈၀ ဒီဂရီဖြစ်သဖြင့် ၃၀ ဒီဂရီသည် များစွာခြားနားသော ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးမည်မဟုတ်ပေ။ အခြားအသွားနှေးသော စနေ ကြာသာပတေးတို့အတွက်ဆိုလျှင် ဆိုဖွယ်မရှိပေ။
(၂) ဒသာဝဂ္ဂသည် ဥစ္စဗလနှင့်ယှဉ်လျှင် လက်ခံဖွယ်ရှိသည်။ ရာသီကို စိတ်ပိုင်းမှုအရ န၀င်းစက်သည် ၃.၃၃၃၃ အင်သာ (ဒီဂရီ) အတွင်းတည်သည်။ န၀င်းစက်တွင်လည်း တနင်္ဂနွေ၏န၀င်းသည် သုံးရက်မျှကာလအတွင်း မပြောင်းလဲဘဲတည်နေမည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာလိုသူအနေဖြင့် မွေးချိန်လေးများပြောင်းလဲကာ % များပြောင်းလဲမှုကို စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါသေးသည်။
(၃) အဌ၀ဂ္ဂသည် လဂ်မှအစ ဂြိုဟ်အားလုံး၏ ရပ်ရာရာသီကိုသုံးသဖြင့် (အတန့်အရယူဆသဖြင့် ဘာဝစက်ကိုလည်း သုံးသင့်သည်ထင်ပါသည်။) ရာသီစက် ဘာဝစက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် လဂ်၏ပြောင်းလဲပုံလည်း အရေးပါသဖြင့် ၂ နာရီမျှသော ကာလအတွင်းမွေးသူများ တူညီကြမည်။
ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် အဆိုပါအားများကို ကာလအတန်ကြာ ဘ၀င်မကျဖြစ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။
အထက်ပါဇာတာတွင်လည်း ၃၀ % ကျော်မျှသော တနင်္ဂနွေအား တနင်္လာအားတို့သည် ဇာတာရှင်၏ အစွမ်းအစ၊ အေးချမ်းမှုတို့ကို ဖေါ်ပြသည်ဟု ယူဆရမည်ဆိုပါက တက်တက်စင်ပင်လွဲမှားသွားနိုင်ပါသည်။ မိခင် ဖခင်တို့နှင့် ပတ်သတ်သော အကျိုးပေးဟု ယူဆနိုင် မယူဆနိုင်တော့ ကျွန်တော်မသိပါ။ သို့သော် ဇာတာရှင်၏ ဘ၀အခန်းကဏ္ဍအရည်အချင်းများတွင် ထိုအားမျှဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မဖေါ်နိုင်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
MOTAA စနစ်မှ ဂြိုဟ်အားများ
အထက်ပါဇယားမှာ MOTAA အသင်းပထမဆင့်မှာ အသုံးချဇယားဖြစ်ပြီး၊ C# ဖြင့် MOTAA မူအတိုင်း ရေးသားတွက်ချက်ထားပါသည်။
၄င်းတွင် ရာသီတွင်းမှ အရေးပါသော ဥစ်နိစ်များမှသည် မိတ်ရန်တိုင် အားများအပြင် နေလောင်မှုတို့ကိုလည်းကောင်း လဂ်အရဖြစ်တည်သော အားတို့ကိုလည်းကောင်း မိမိသခင်ဖြစ်ရာ မိမိရပ်ရာအိမ်များသို့လည်းကောင်း မိမိသခင်၏ အားများကိုလည်းကောင်း ထောင့်စေ့အောင် အချိုးချကာ ဆရာနျူမာန်ပြုစု ဖန်တီးထားသော နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုဇယားမှ ပြဆိုပုံအရ ထိုဇာတာရှင်သည် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားတို့မှသည် အစွမ်းအစများ ကောင်းမွန်လှသော အခြေအနေများကို ပြဆိုနေပါတော့သည်။
အတန့်အလယ်များသို့ မည်သူတို့ အားသက်ရောက်သနည်းဟူမူ
အထက်ပါဇယားအရ အတန့်အလယ်မှတ်များဆီသို့ ပူးယှဉ်သော မြင်သော ဂြိုဟ်အားများကို ပြဆိုလေသည်။
ဇာတာရှင်တွင် ကြီးမားသော အားမှာ ၉ တန့်နှင့် ၃ တန့်တွင်ပြဆိုသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားမှုနှင့် အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀န်းကိုပြဆိုနေသည်။
ထိုဇယားလေးသည် တွေးလျှင်တွေးသလောက် ထုတ်ယူတွေးတောနိုင်ပါသေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၂၃၉% ရရှိသော ၉ တန့်သည် ၁ နွေမှ ၉၉% ၄ ဟူးမှ ၆၆% ၅ တေးမှ ၅၅% စနေမှ ၇၃% တို့ အားသက်ရောက်လျှက်ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကြီးမှု၊ သတင်းပညာ ဗီဇအစွမ်း၊ ပညာစွမ်း၊ ရေရှည်မျှော်ကိုးမြှုပ်နှံစောင့်စည်းနိုင်မှုတို့ကြောင့်ဟူ၍လည်း ယူဆနိုင်ပါသေးသည်။ ( ငွေကြေးဓန သောကြာ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် လင်ယောကျာ်းသဘာဝ အင်္ဂါစသည်တို့ကြောင့် မဟုတ်သည်ကို သတိပြုပါ။ ကဏ္ဍများ ကွဲပြားအဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။)
အကယ်၍သာ မွေးချိန် မိနစ် အနည်းငယ် ကွဲပြားသွားပါမူမည်သူ့ဖြစ်မည်နည်း။ မူလက ၁၀၀ % လဂ်နှင့် ဂြိုဟ်တစ်လုံးဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဆိုပါစို့။ လဂ်သည် ၅ အင်သာ (ဒီဂရီ) ဝေးသွားပါက ၆၀ % သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ပိုဝေးပါက 60% အောက်ကျကာ အကျိုးပေး အလွန်နည်းသွားပြီဖြစ်သည်။ လဂ် သည် ၃၀ အင်သာသို့ ၂ နာရီ (၁၂၀ မိနစ်) သွားသဖြင့် ၅ အင်သာအတွက် ၂၀ မိနစ်မျှ ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် မွေးချိန် ၂၀ မိနစ်ကျော် ကွာခြားလိုက်ပါက တက်တက်စင်ပင် လွဲမှားကာ အင်အားယုတ်လျော့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် မွေးချိန်တိကျမှုအရေးပါလှသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ မွေးချိန်ပြောင်းလဲမှု ဒဏ်ကို အခံစားရဆုံးမှာ လဂ်ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
မူလဇာတာတွင်မက ဒသာများသည်လည်းကောင်း၊ ကောဇာများသည်လည်းကောင်း လဂ်နှင့် မကင်းနိုင်ပေ။
ဂြိုဟ်အချင်းချင်း (ပူးယှဉ်) ဆက်နွယ်မှုအား
အထက်ပါဇယားသည် ဂြိုဟ်တစ်လုံးမှ တစ်လုံးသို့ ဆက်နွယ်မှုကို ပြဆိုနေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဂြိုဟ်အချင်းချင်း ဆက်နွယ်သော ယုဂ်များကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၄င်းကိုပင် မည်သည့်ဂြိုဟ်သည် မည်သည့်အိမ်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု ထည့်သွင်းလိုက်ပါက အတန့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်သော ယုဂ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် တနင်္ဂနွေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး တို့ ပြန်လှန်ဆက်သွယ်ကာ 62% အားရှိကာ မိတ်ရန်မမူသော သူရိယဗုဒ္ဓယုဂ်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ ဥာဏ်ပညာပြောင်မြောက်မှု၊ ပညာရေးကောင်းမွန်မှု ကျော်ဇောမှုတို့ရနိုင်လေသည်။
စနေမှ တနင်္ဂနွေသို့ ရန်အဖြစ်မြင်သော 70% သည် အလုပ်ပင်ပမ်းစွာလုပ်ရတတ်သော သူရိယာသောရီယုဂ်ကိုဖြစ်စေသည်။ ရန်သဘောလည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် တနင်္ဂနွေသည်အထိနာသည်။ ၈ ဟုမှလည်း ၁ တနင်္ဂနွေသို့ ရန်ပြုသော 61% သည် ဇာတာရှင်၏ အကြီးအကဲအဖနှင့် အိမ်ထောင်ဦးစီးတို့ကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးမှ စနေသို့ဆက်သွယ်သော ၉၉% ရှိ အားသည် ဗုဓာသောရယုဂ်သည် လက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုမှ တော်လှန်တွန်းထွက်လိုသော၊ ဆန်းကျယ်သောဥာဏ်ပညာရှိသော စရိုက်တို့ကို ဖေါ်ပြနေသည်။ စာပေကလောင်အားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်ရေးသားခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မည်။
12.4.1974 မှ 12.4.1981 ကာလများဟာ (နိစ်အိမ် ဥစ်န၀င်း ၆တန့်သခင် ၁၁တန့်အိမ်ရှင် ၂တန့်ရပ် အင်္ဂါ၏ ဒသာကာလဖြစ်သောကြောင့်)
-ဇာတာရှင်၏ စွန့်စားမှု သတ္တိမွေးမှု ရဲရင့်မှုတို့သည် (နိစ်အိမ်ရပ် အင်္ဂါကြောင့်) အပြင်ပမ်းအားဖြင့် ချိုးနှိမ်ခံရခြင်း၊ မတောက်ပနိုင်ခြင်း၊ သိမ်ငယ်ခြင်းစသည့် အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်မည်။
-(အတွင်း အဇ္ဈတ္တကို ဖေါ်ပြသော န၀င်းတွင် ဥစ်မူသဖြင့်) အတွင်းစိတ်ဝယ် ခိုင်ကြည်မြဲမြံတောက်ပသော အတွေးစိတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ရဲရင့်မှုတို့သည် အံဖွယ်ထွန်းတောက်လာမည်ဖြစ်သည်။
-(ရန်သဘောသဘာဝ ၆ တန့်သခင် ဒသာဖြစ်သဖြင့်) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိမိအပေါ်ရန်လိုသူ အယှဉ်အပြိုင်အတိုက်အခိုက်များ ရှိနိုင်သည်။ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ကာ ပင်ပမ်းရမည်။ (၀င်ငွေနှင့် မိတ်ဆွေကောင်းများကို ဖေါ်ပြသော ၁၁ တန့်အိမ်ရှင် ဒသာလည်းဖြစ်သဖြင့်) ရွယ်တူတန်းတူများထဲမှ မိမိအပေါ်နားလည်ပေးသူ ကူညီသူများလည်းရှိနိုင်သည်။ အတိုက်အခိုက်က ပိုများမည်ဖြစ်သည်။
- (၃င်္ဂါကို အခြား အားကောင်းသော အမြင်အယှဉ် မရှိသဖြင့် ) အန္တရဒသာများမှာ သီးခြားအကျိုးများ ဖြစ်ပွားမည်။
-အင်္ဂါမှ ကိတ်သို့ 69% အားသက်ရောက်သဖြင့် (၉ကိတ်ဂြိုဟ်သည် အခက်အခဲမှ ဖြေရှင်းရခြင်း၊ စတင်တည်ဆောက်ရခြင်း စသည့် အဓိပ္ပါယ်များပါဝင်သဖြင့်) ဇာတာရှင်အတွက် အရေးပါသော စိတ်ညစ်ဖွယ်ကိစ္စများမှာ ရုန်းထွက်ရမည်ကို ပြဆိုပါသည်။
-၂ ၅ ၈ ၉ အတန့်အလယ်မှတ်များကို 18 % အားဖြင့် ဆက်သွယ်နေသဖြင့် ငွေကြေးဥစ္စာ၊ ပညာရေး၊ ကာမ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ များနှင့် များစွာ ပတ်သတ်မည့်ကာလဖြစ်သည်။
12.4.1981 မှ 7.4.1999 အတွင်းတွင် ( တနင်္ဂနွေအား ၆၁ % ဖြင့်ရန်ပြုသော၊ ဗုဒ္ဓဟူးအား ၁၆ % သက်ရောက်သော၊ သောကြာအား ၁၉ % မိတ်ပြုသော၊ စနေမှ ၂၀ % သက်ရောက်သော) ရာဟုဂြိုဟ် ဒသာစားသည်။ ရာဟု ပင်ကိုယ်သဘောသည် မမျှော်လင့်သည်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
-ဇာတာရှင်၏ အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်း ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖေါ်ညွှန်းသည့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို ရာဟုက ဖျက်စီးလျှက်ရှိသည်။
-ဇာတာရှင်၏ ထက်မြက်မှု talent ကို ညွှန်းဆိုသော ဗုဒ္ဓဟူးကို ရာဟုဒသာရှင် မြင်သဖြင့် ဇာတာရှင်၏ အစွမ်းအစအရည်အချင်းများ ထုတ်ဖေါ်ပြနိုင်ရာ ကာလဖြစ်သည်။
-အချစ်မေတ္တာ ကာမကို ညွှန်းဆိုသော သောကြာကို ၁၉ % အားပြုသောကြောင့် အချစ်မေတ္တာရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ မမျှော်လင့်သော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်စေမည်။
-စနေမှ ရာဟုသို့ ၂၀ % အားပြုသည်က ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်မကင်း ပူပမ်ရမည့် အနေအထားကို ပြဆိုပါသည်။
-၃ ၅ ၇ ၁၁ တန့်အလယ်မှတ်များကို 57% ဆက်သွယ်သဖြင့် ဆွေးမျိုးသားချင်း၊ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ၀င်ငွေများဖြင့် များစွာ ဆက်စပ်နေမည့်ကာလဖြစ်သည်။
အန္တရဒသာ အသေးစိတ်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ရှင်းပြပါမည်။
12.4.1999 မှ 2.4.2015 အတွင်းတွင် (ဥစ်ရာသီ မိတ်န၀င်း လဂ်နှင့် ၅၅% ကိတ်မှ ၁၁ % စနေသို့ ၉၄% ကိတ်သို့ ၁၁ % သက်ရောက်သော) ကြာသာပတေး၏ ဒသာဖြစ်သည်။
ကြာသာပတေး၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝသည် ပညာရေး၊ ပညာသင် လူငယ်၊ ဆရာသမား သင်ကြားမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည်။
-ဥစ်ရာသီ မိတ်န၀င်းစီးသည့် ဂြိုဟ်အားလျှော်စွာ အင်မတန်ကောင်းမွန်သော အတွေးအမြင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပြဆိုနေသည်။
-ရန်အမြင်သက်ရောက်သော သဘောတို့မရှိသဖြင့် ကောင်းမွန်သော ကာလလည်း ဖြစ်သည်။
-ထို့ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်မှာ ကြာသာပတေးမှ စနေသို့ ၉၄ % သက်ရောက်သော သဘောဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်တွင် တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ခြင်းပါ ထပ်ပေါင်းထားသဖြင့် အတွေးအမြင်များ ရှင်းလင်းလာခြင်း ကြည်လင်လာခြင်း စသည့်အကျိုးများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
-၁ ၅ ၇ ၉ အတန့်အလည်မှတ်များကို ၅၅ % အားပြုလျှက်ရှိသည်။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာ၊ ပညာရေး(သားသမီး)၊ အိမ်ထောင်ရေး ဂုဏ်သိက္ခာ များဖြင့် များစွာ ဆက်စပ်နေသည်။
18.11.2012 မှ 2.4.2015 ကြားတွင် ဒသာနှင့် မဆက်စပ်သော ရာဟု အန္တရစားလေသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ အတွေးများမှ မဆက်စပ်သော အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ပြဆိုနေသည်။
12.4.2015 မှ 2.4.2034 တွင် ( ရာသီစက်တွင် အင်အားအလယ်အလတ်တည်ကာ၊ တနင်္ဂနွေအား ရန် အဖြစ် ၇၀ % တနင်္လာအား ရန်အဖြစ် ၁၃% ဗုဒ္ဓဟူးအား မိတ်အဖြစ် ၉၉%၊ ရာဟုအား 20% အားပြုသော ၊ တနင်္ဂနွေမှ ၇၀% ရန်ပြုသော၊ ဗုဒ္ဓဟူးမှ ၉၉ % ကြာသာပတေးမှ ၉၄ % အားပြုသော) စနေ၏ ဒသာဖြစ်သည်။ ၈တန့် ၉ တန့် အိမ်ရှင်နှင့် သခင် ဖြစ်ကာ ၁၀ တန့်ရပ်သည်။ ၃ ၆ ၉ ၁၁ တန့်တို့၏ ဘာဝအလယ်မှတ်များသို့ 73 % အားပြုလျှက်ရှိသည်။ စနေ၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝသည် သည်းခံခြင်း၊ မြဲမြံခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ပင်ပမ်းခြင်းကို ပြဆိုသည်။
-( တနင်္ဂနွေအား ရန် အဖြစ် ၇၀ % တနင်္လာအား ရန်အဖြစ် ၁၃% ဆက်သွယ်သဖြင့်) မိမိအိမ်တွင်း အိမ်ထောင်ဦးစီးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိသားစု အေးချမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ပူပမ်မကင်းသော အခြေအနေကို ပြဆိုပါသည်။
-( ဗုဒ္ဓဟူးအား မိတ်အဖြစ် ၉၉% ဆက်သွယ်သဖြင့်) ဥာဏ်လွှာသုံးရသော လုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးမည်။ ထိုလုပ်ငန်းသည် လောင်းကစားဆန်ဆန်ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဇာတာရှင်အတွက်မူ အကျိုးပေးကောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်၏ အများနှင့်ဆက်ဆံရေးများ လမ်းပွင့်လာမည်။
-(၈တန့် ၉ တန့် အိမ်ရှင်နှင့် သခင် ဖြစ်ကာ ၁၀ တန့်ရပ်သဖြင့်) အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲရှိမည်။ ထိုအပြောင်းအလဲသည် ကာလအတန်ကြာ မြှုပ်နှံထားသော ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ပေါ်ရေးကို အားပေးမည်။ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း တိုးတက်လာမည်။
-ဆွေးမျိုးသားချင်း၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်၊ အကြီးအကဲ၊ မိမိအပေါ် စေတနာထားသူများနှင့် ပိုမိုပတ်သက်လာမည်။
အန္တရ ဒသာကာလ အကျိုးဆက်များ
ဒသာကာလတိုင်းတွင် အန္တရဒသာများ ခွဲဝင်အသုံးတော်ခံရာ သက်ဆိုင်ရာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့ ယှဉ်တွဲမှု အခြေအနေအရ အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပွားရသည်။
(အင်အား 530% ရှိကာ ၃တန့်နှင့် ၉တန့်အလယ်များကို ၉၉% မြင်လျှက်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးမှ ၆၂%(မိတ်) စနေမှ ၇၀%(ရန်) ရာဟုမှ ၆၁%(ရန်) တြိဂုဏ်းမိတ်န၀င်း)
- ဇာတာရှင်တွင် ကြီးမားသော ဦးဆောင်နှိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၄င်းတို့ကို သဟဇ ပတ်ဝန်းကျင် အများသူငါအတွက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်လာစေသည်။
-ဇာတာရှင်သည် တည်ငြိမ်သော အခြေအနေတစ်ခုကို ရပ်တည်ရန် ခဲယဉ်းလှသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တို့သည် ပြင်ပအကြောင်းတို့ကြောင့် ပျက်ပြားတတ်ပါသည်။
-စာပေအရေးအသား သတင်းပြန်ကြားရေးအတွက် ဘာဝတွင် အထင်ကရ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် တနင်္ဂနွေဆက်သွယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘ၀တွင် အမှတ်တရ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။
(အင်အား 273 % ၃ တန့်နှင့် ၉ တန့်အလယ်များကို အားနည်းပါးစွာ မြင်လျှက်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးမှ ၁၈ စနေမှ ၁၃ % မြင်လျှက်ရှိသည်။ ရန်အိမ် မိတ်န၀င်း ဖြစ်သည်။)
-ခံစားနုနယ်မှု၊ မိခင်စိတ်၊ အများဆန္ဒလိုက်လျောမှု မိခင်မေတ္တာကို ညွှန်းဆိုသော တနင်္လာသည်လည်း အားကြီးမားသည်။ သို့သော် ရန်အိမ်တွင်ရပ်သဖြင့် ပြင်ပအမြင်တွင် ကြမ်းတမ်းသော စိတ်ထားရှိသူနှယ် ဖြစ်တတ်မည်။ သို့တည်းမဟုတ် မေတ္တာကို ဖေါ်ပြနိုင်စွမ်းနည်းသော စရိုက်သဘာဝဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ အတွင်း အဇ္ဈတ္တကို ဖေါ်ပြသော န၀င်းတွင် မိတ်န၀င်းစီးသဖြင့် နုနယ်သောစိတ်ထား နားလည်ပေးနိုင်သော စရိုက်တို့ကို ဖေါ်ပြနေသည်။ ပြင်ပတွင် မဖေါ်ကျူးနိုင်ပဲ စာပေမှဖြစ်စေ၊ သတင်းပညာမှဖြစ်စေ ဖေါ်ထုတ်နိုင်သော အနေအထားတို့ဖြစ်ပါသည်။
(173% အားရှိကာ ၂ ၅ ၈ ၉ အတန့်အလယ်များသို့ ၁၈ % အားပြုသည်။ ၆ တန့် ၁၁ တန့် အိမ်ရှင် သခင်ဖြစ်ကာ ၂ တန့်ရပ်သည်။ နိစ် ဥစ်န၀င်း)
-အင်္ဂါသည် မိန်းမသားတစ်ဦးအတွက် ခင်ပွန်းကို ညွှန်းဆိုပါသည်။
-အင်္ဂါသည် ရာသီစက်တွင် နိစ်မူကာ အခြားမည်သည့် ဂြိုဟ်ကမှ မသက်ရောက်ဘဲ သီးသန့်တည်သည်။ ( ကြာသာပတေးသည် ဝေးကွာသဖြင့် အားမဲ့နေသည်။) ဇာတာရှင်သည် ခင်ပွန်းကံ ညံ့သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ခင်ပွန်းသည် ဇာတာရှင်အတွက် အားကိုးလောက်ဖွယ် မရှိနိုင်ဖြစ်တတ်သည်။ အတန့်အလယ်များသို့ အင်အားနည်းစွာ သက်ရောက်သည်။ ( ၆၀% ၀န်းကျင်နှင့်အထက်များသည် အားရှိသည်။)
- ထို့အတူ ဇာတာရှင်၏ ရဲရင့်မှုကိုလည်း အင်္ဂါက ပြဆိုသဖြင့် စိတ်ထင်တိုင်း မလုပ်ဘဲ တွေးဆညှိနှိုင်းတတ်သော (သံသယများသော တွေဝေထောက်ဆ တတ်သော) သဘာဝတို့လည်း ဖြစ်တည်မည်။ ဇာတာရှင်တွင် တနင်္ဂနွေအားကောင်းသဖြင့် ကျရှုံးဖွယ်မရှိပါ။
(268 % ဥစ်မိတ်န၀င်း၊ လဂ်အိမ်ရှင် မိမိဘာဝ ၄ တန့်ရပ်၊ ၃ တန့်နှင့် ၉ တန့်ကို ၆၆ % စိုးမိုး၊ တနင်္ဂနွေမှ ၆၂% စနေမှ ၉၉ % စိုးမိုးသည်။)
-ဇာတာရှင်၏ ထက်မြက်မှု၊ ဗီဇအစွမ်း၊ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် ဆိုင်သော ဗုဒ္ဓဟူးသည် အင်အားကောင်းမွန်လှသည်။ အခြားဂြိုဟ်များမှ ရန်ပြုခြင်းမခံရကာ၊ အတန့်များကို ကောင်းစွာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
-ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ဗီဇအစွမ်း၊ သတင်းပညာအစွမ်းဖြင့် ရယူမည့်သူဖြစ်သည်။ ၄၀ ဆက်သွယ်ခြင်းသည် ဗုဓာသောရ အမည်ရ ယုဂ်ကို ဖြစ်စေကာ၊ တော်လှန်ပုန်ကန်သော စိတ်ထား၊ ပြုပြင်စေ့စော်လိုသော စိတ်ထား၊ ဘက်စုံမှ လှည့်ပတ်တွေးယူနိုင်သော (အလောင်းကစားသမား) စိတ်ထားမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၄င်းနှင့်ပတ်သတ်ကာ ဂုဏ်သိက္ခာ (၉ တန့်) ကိုလည်း တည်ဆောက်သွားမည့်သူဖြစ်သည်။
-တနင်္ဂနွေနှင့်ဆက်သွယ်ပုံမှာလည်း ဗုဒ္ဓတိကျယုဂ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဥာဏ်ပညာနှင့် ကျော်ဇောမှုကို ပြဆိုသည်။
(165% ဥစ် မိတ်န၀င်း၊ ၁ ၅ ၇ ၉ ကို ၅၅% အားဖြင့် ဆက်သွယ်သည်။ စနေသို့ ၉၄% ဆက်သွယ်သည်။)
-သားသမီး ပညာရေး တပည့်တပန်း စီမံခံ့ခွဲမှုကို ဖေါ်ပြသော ကြာသာပတေးသည် အခြားကဏ္ဍတို့ မနှောင့်ယှက်ဘဲ သီးသန့်တည်သည်။ ဇာတာရှင်၏ စိတ်နေသဘောထား၊ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာတို့သည်လည်း ထို သားသမီးပညာရေးတို့နှင့်သာလျှင် ဆက်စပ်နေသည်။
-အင်မတန်ကောင်းမွန်သော အနေအထားဖြင့်သဖြင့် အထက်ပါကဏ္ဍများ ထူးခြားကောင်းမွန်မည်ဟုသာ အဖြေထုတ်နိုင်ပါသည်။
-(317% ရန်အိမ် ရန်န၀င်း၊ ရာဟုမှ ၁၉% ဆက်သွယ်သည်။)
ဇာတာရှင်၏ တောက်ပမှု၊ ကြွားဝါလိုမှု၊ ကာမဂုဏ် ကာမကို ဖေါ်ပြသော သောကြာသည် အင်အားကြီးမားသော်လည်း ရန်အိမ်ရန်န၀င်းတည်သဖြင့် ကာမဂုဏ်အမှုကို မစံစားနိုင်သော အနေအထားကို ပြဆိုသည်။
-အင်အားကြီးမားမှုအရ ချို့တဲ့ခြင်းကို မကြုံနိုင်ပါ။ ဇာတာရှင်၏ စိတ်ထား၊ မမျှော်လင့်သော အကျိုးပေးတို့ကြောင့်သာလျှင် မစံစားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(284% တနင်္ဂနွေမှ 70% ရန်၊ တနင်္လာမှ 13% ရန်၊ ဗုဒ္ဓဟူးမှ ၉၉% ကြာသာပတေးမှ ၉၄ % ဆက်သွယ်သည်။)
-ဇာတာရှင်၏ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော စိတ်အခြေအနေ/ဘ၀ရပ်တည်မှုကို လှုပ်ရှားသွားလာစေတတ်သော တနင်္ဂနွေမှ ၇၀% ရန်ပြုကာ ပြောင်းလဲစေသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုသည် အမိသဘာဝ အေးချမ်းမှုနှင့်လည်း မကင်းပေ။
-စာပေ စကားအဆက်သွယ် အရေးအသားများမှ အားကြီးစွာ ဆက်သွယ်သဖြင့် အေးချမ်းသော စိတ်အခြေအနေ ဘ၀ရပ်တည်မှုကို ပေးနိုင်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှိုင်စွမ်းရှိသော ပညာရှိစိတ် (၅တေး ၉၄%) သည်လည်း ကူညီနေမည်ဖြစ်သည်။
ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့၏ ဆက်စပ်မှု
ယခုလတ်တလော ရောက်ရှိရာကာလများကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်ရပါလျှင်
၂ တန့်ရပ် ၇ တန့်သခင် ၁၀ တန့်အိမ်ရှင်၏ ဒသာဖြစ်ကာ၊ ဆက်စပ်မှုအနေဖြင့် လဂ်နှင့် ၅၅% ကိတ်မှ ၁၁ % စနေသို့ ၉၄% ကိတ်သို့ ၁၁ % သက်ရောက်သည်။
1.6.2001 မှ 12.12.2003 အတွင်းသည် (5*0) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့ ဆက်စပ်ကြသည်။ စနေသည် ၈ တန့်အိမ်ရှင်နှင့် ၉ တန့်သခင်ဖြစ်ကာ ၁၀ တန့်ရပ်သည်။ ၅ နှင့် ၀ အတွဲသည် သဘာဝအားဖြင့် ကောင်းစွာစီမံနိုင်သော ဇိဝါသောရယုဂ် အားလျှော်စွာ ပညာဥာဏ်စွမ်းအရ ကြီးစွာသော အကျိုးကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အလုပ်အကိုင်မျိုး လုပ်ကိုင်ဖြစ်မည်။ ၈ တန့်အိမ်ရှင်ဖြစ်ကာ ပါပသဘာဝကြောင့် ကာလရှည်ကြာစွာ ပူပမ်ရသော အပူပမ်မျိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင်ဖွယ်မရှိပေ။
12.12.2003 မှ 18.3.2006 အတွင်းသည် (5*4) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာမဆက်စပ်ကြပေ။ အန္တရဒသာမှ အားကြီးစွာ စိုးမိုးမည်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ဗီဇအစွမ်း၊ သတင်းပညာအစွမ်းဖြင့် ရယူနိုင်မည်ကာလဖြစ်သည်။ ဗုဓာသောရ အမည်ရ ယုဂ်၏ ဖေါ်ဆောင်ရာ ယောဂကာရက ဂြိုဟ်ဖြစ်ကာ၊ တော်လှန်ပုန်ကန်သော စိတ်ထား၊ ပြုပြင်စေ့စော်လိုသော စိတ်ထား၊ အလုပ်အကိုင် အကြံပေးစသည့် အလုပ်များလုပ်ကိုင်ဖြစ်မည်။ လဂ်အိမ်ရှင် မိမိဘာဝ ၄ တန့်ရပ်သဖြင့် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကြိုးစားဖြစ်ကာ မိသားစုတွင်း ဆက်ဆံရေးပြေလည်လာမည်။ တနည်းအားဖြင့် ပွင့်လင်းလာမည်။
18.3.2006 မှ 24.2.2007 အတွင်းသည် (5*9) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့ ဆက်စပ်မှုနည်းသည်။ ကိတ်သည် ၅ တန့်တွင်တည်ကာ ၁ ၉ ၁၁ တို့အား ၅၇% ဖြင့် ဖျက်စီးသောကြောင့် ယခုကာလသည် ကိတ်သဘာဝအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးကာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ခြင်း ပြဿနာများဖြေရှင်းရခြင်း မိမိချစ်ခင်သူများနှင့် ပတ်သတ်ပြဿနာကြုံတတ်ရသည်။ ၀င်ငွေ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မိမိကျမ်းမာရေးတို့ အနည်းငယ်ညံ့တတ်သည်။
24.2.2007 မှ 24.10.2009 အတွင်းသည် (5*6) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့ ဆက်သွယ်မှုမရှိပေ။ အားကြီးရာ အန္တရမှ တွေးယူသော် သောကြာသော ၁၂ တန့်အိမ်ရှင် ၅ တန့်သခင်ဖြစ်ကာ ၃ တန့်တည်သဖြင့် သားသမီးအရေ ရတက်မအေးဖြစ်ရတတ်သည်။ သို့မဟုတ်ငွေကုန်မည်။
24.10.2009 မှ 12.8.2010 အတွင်းသည် (5*1) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့ မဆက်စပ်ပေ တနင်္ဂနွေအန္တရအရ မိမိသခင်ဖြစ်ရာအိမ်တွင် ရပ်တည်သဖြင့် မူလက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း အန္တရဒသာအကျိုးအရ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပွားမည်။
" ဇာတာရှင်တွင် ကြီးမားသော ဦးဆောင်နှိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၄င်းတို့ကို သဟဇ ပတ်ဝန်းကျင် အများသူငါအတွက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်လာစေသည်။
-စာပေအရေးအသား သတင်းပြန်ကြားရေးအတွက် ဘာဝတွင် အထင်ကရ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် တနင်္ဂနွေဆက်သွယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘ၀တွင် အမှတ်တရ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။"
12.8.2010 မှ 12.12.2011 အတွင်းသည် (5*2) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင် အန္တရဒသာတို့ မစပ်ဆက်ပေ။ ၂ တန့်အိမ်ရှင် ၄ တန့်တည်ရာကာလဖြစ်သည်။ စုဆောင်းထားသမျှကို မိသားစုတွင်း ပျော်ရွှင်ရေးအတွက် အသုံးချရနိုင်သည်။ မိခင်မေတ္တာ စာနာမှုများ ပေါ်ပေါက်မည်။
12.12.2011 မှ 18.11.2012 အတွင်းသည် (5*3) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာ မဆက်စပ်ပေ။ ၆ တန့်သခင် ၁၁ တန့်အိမ်ရှင် ၂ တန့်ရပ်လျှက်ရှိသောကြောင့် ငွေကြေးလာဘ်လာဘများ စုဆောင်းမိမည်။ အရေးပါသော စီးပွားဝင်ငွေ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ဖြစ်မည်။
18.11.2012 မှ 2.4.2015 အတွင်းသည် (5*8) ဒသာဖြစ်ကာ ဒသာနှင့် အန္တရဒသာတို့ မဆက်စပ်ပေ။ ၈ဟုသည် ၁၁ တန့်ရပ်ကာ ၃ ၅ ၇ အတန့်များကို ၅၇% ဖျက်စီးထားသည်။ ဇာတာရှင်၏ ၀င်ငွေ ပတ်ဝန်းကျင် ချစ်ခင်သူများ အိမ်ထောင်ရေးတို့၌ အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်မည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကောဇာစစ်ဆေးမှုမှာ တစ်နှစ်အတွင်း တစ်နှစ်အတွင်း သုံးနှစ်အတွင်း ကာလများအတွက်သာ စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါသည်။ အချိန်ကုန်ခြင်း ခေါင်းရှုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတာရှင်၏ အမေးမှာ အပြောင်းအလဲကို မေးမြန်းသဖြင့် ဤတွင် အနှစ်ချုပ်ပါသည်။
အဆိုပါ အစ်မမှာ နက္ခတ်ဗေဒင်ကို ၀ါသနာပါသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်နှင့် အညီ အန္တရဒသာများကို ဇယားများမှ လိုက်လံ တိုက်ဆိုင်ကာ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်သမျှ အဖြစ်အပျက်တို့ကို ရက်စွဲများဖြင့် မှတ်ချက်ပြုလာကာ ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက်လည်း များစွာသောငွေကြေးတို့ဖြင့် အလှူအတန်းပြုပေးခဲ့ပါသည်။
အကြောင်းပြန်စာကို ထို အစ်မက ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါသောကြောင့် ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
"မင်းပြောတဲ့ နေ့စွဲတွေက သွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ်။
၁၉၉၆ မတုိုင်ခင်က ကိစ္စတွေကုို အစ်မ နောက်တော့ ပြောမယ်။ အခုရေးထားတာတွေမှာ သိချင်တာ ရှိရင် ထပ်ပြောပါ။
1996 February လထဲမှာ မျှော်လင့်ထင်မှတ်မထားတဲ့ အလုပ်ကုို ရတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အတင်းဝင်ဖြေခုိုင်းလုို့ သွားဖြေရင်း ရလာတာ။ အစ်မထက် တော်တဲ့ ပညာတတ်၊ နုိုင်ငံခြားပြန် မိန်းကလေး အတော်များများ ဝင်ဖြေပေမဲ့ သူတုို့ကုို မပေးပဲ အစ်မကုို ရွေးခန့်ခဲ့တယ်။ ရတဲ့အလုပ်က ဝင်ငွေကောင်းတော့ မောင်လေး နဲ့ ညီမလေးကုို ကျောင်းခေါ်ထားပေး၊ ကုိုယ်တုိုင်လည်း ကျောင်းတက်ရင် အလုပ်လုပ်၊ဆုိုတော့ နောက်ထပ် ဒီပလုိုမာ ရတဲ့အချိန်၊ မောင်လေးလဲ ၁၀တန်းအောင်၊ ညီမလေးလဲ ဘွဲ့ရပေါ့။ အမေပေါင်ထားတဲ့ အိမ်ကုို ပြန်ရွေးပေးလုိုက်နုိုင်တယ်။
ငွေတွေကုို ဝင်အောင် ရှာနုိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ချမ်းသာလောက်အောင်တော့ မဝင်ခဲ့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ အမေနဲ့ ပါတ်သက်လုို့ စဉ်းစားလုိုက်ရင်တော့ မကြေမချမ်း အမြဲ ဖြစ်ရတယ်။ အပေါင်ဆုံးမတတ်ဖြစ်နေတုန်း ရွေးပေးလုိုက်တဲ့ အိမ်ကုို သူများလိမ်သွားတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ သိန်း ၂၀၀ လောက်တန်တဲ့ အိမ်ကုို ၅သိန်းလောက်နဲ့ ဆုံးသွားတာ. လိမ်သွားတဲ့ လူက ကုလား။ မောင်အလတ်နှစ်ယောက်ကုို ကျောင်းထားပေးထားတာ၊ အမေက သူငွေလုိုတယ်ဆုိုပြီးကလေးနှစ်ယောက်ကုို ကျောင်းထုတ်၊ အလုပ်လုပ်ခုိုင်းတယ်။ အစ်မကုို ၁၉၈၁ ခုနှစ် အသက် ၁၅နှစ်လောက်မှာ ချမ်းသာတဲ့ တရုတ်တစ်ယောက်နဲ့ အတင်း စီစဉ်တယ်။ သူ့ကုို အဲဒီသူဌေးက သိန်း ၂၀ပေးမယ်လုို့ ပြောလုို့တဲ့။ အစ်မက ၁၅နှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။
အမေ့ကုို နောက်ထပ်လုံးဝမတွေ့နုိုင်တော့ဘူး။ ငွေတော့ ရံဖန်ရံခါထောက်ပါတယ်။ အမေက ညီမအလတ်တစ်ယောက်နဲ့ နေတယ်။ အဲဒီညီမက ငွေကြေးအတော် ချောင်လည်တယ်။
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ ရာဟု
အိမ်မှာ အစ်မကုို သူပုန်လုို့ ခေါ်တယ်။ သူများလုို တွေးရုိုးတွေးစဉ် မတွေးပဲ ဝေဖန်တာ၊ ဆန်းစစ်တာ၊ မမှန်ရင် ငြိမ်မခံတတ် တာတွေကြောင့်။ ဒါပေမဲ့ ထိပ်တုိုက်၊ ဝုန်းဒုိုင်းကြဲ ရင်ဆုိုင်တာမျိုးကုို လုပ်ခဲတယ်။ လုပ်ပြီဆုိုရင်တော့ နောက်ပြန်မဆုတ်တော့ဘူး။ တဖက်လူ လက်နက်မချမချင်း အသေအကြေချေမှုန်းဘုို့ သံဒိဌန်ချထားတယ်။ နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကြာပါစေ။ အနုိုင်ယူဘုို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီဆုိုရင် အဲဒီလူ ဘယ်ဘဝရောက်နေလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေလဲ လုံးဝမျက်ခြေမဖြတ်ဘူး။ မေ့မသွားဘူး။
အချစ်ရေးကိစ္စဟာ ကံခေပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဧပြီလနောက်ပုိုင်း ရုံးမှာ တွေ့တဲ့ လုပ်ဖေါ်ကုိုင်ဖက် သူတစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းမက၊ ချစ်သူမကျ အခြေအနေကုို ရောက်တယ်။ သူဟာ အစ်မထက် အစစ အရာရာ မြင့်မားသူ ဖြစ်တယ်။ သူက ၁၉၉၆ သြဂုတ်လ မှာ နုိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်။ အဲဒီနောက် စာအဆက်အသွယ်၊ ဖုန်းအဆက်အသွယ်နဲ့ နေခဲ့တာ ၁၉၉၉၈ နှစ်ဆန်းအထိပဲ။ နောက်တော့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တွေ့တာ ၁၉၉၈ အောက်တုိုဘာလဆန်းလောက်မှာပါ။ သူကတော့ ကုလသမဂ္ဂမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အရာရှိတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ထပ်ခြင်းကုို မြန်မာအစုိုးရက အသိအမှတ် မပြုဘူး။ နုိုင်ငံခြားတုိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ လက်ထပ်ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်သူမှ နုိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရတဲ့ အချိန်မှာ အစ်မရဲ့ နုိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကုို ဗုိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကုိုင်တုိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်။
၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ဘဝဟာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ရှိနေတဲ့ အနေအထားထက် အဆများစွာ မြင့်မားတဲ့ အခြေအနေကုို ရောက်သွားတယ်။ ၁၉၉၉ မှာ စုဆောင်းမိထားတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ တုိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်း ဝယ်တော့ မောင်လေးနဲ့ ညီမလေး အတွက် အဆင်ပြေအောင် တုိုက်ခန်းကုို သူတုို့ နာမည်နဲ့ လွှဲလုိုက်တယ်။ ၂၀၀၀ မှာ သားအကြီးကုို မွေးတယ်။ ၂၀၀၅မှာ သားအငယ်ကုို မွေးတယ်။
ခင်ပွန်ုးဖြစ်သူရဲ့ ဇာတာမှာ ရတန့်မှာ စနေနဲ့ ရာဟု ရပ်နေတယ်။ ၄တန့်မှာတော့ ၂လာင်္နဲ့ ဥဒ်ရထားတဲ့ သောကြာပါ။ သူက ဓနုလဒ်လုို့ထင်တယ်။ ကြာသပတေးပြမိထားလုို့လား မသိဘူး။ လူတော်ပေမဲ့ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းတဲ့ လူစား။ အစ်မနဲ့ လုံးဝမတဲ့ဘူး။ အစ်မအလုပ်လုပ်နေစဉ်အခါက သူနဲ့ သိပ်စကား မပြောဖြစ်လုို့ စိတ်သဘောထားချင်း မတုိုက်ဆုိုင်တာ သိတ်မစဉ်းစားမိဘူး။ နောက်ပြီး သူက သောကြာဥဒ်ရသူ ဆုိုတော့ အတော် ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်။ အလုပ်က ထွက်ပြီး သူသွားရာနောက် လုိုက်တော့မှ ဒီလူ အတော် အတွေးချော်ပါလား၊ လုပ်သမျှ အလုပ်တွေဟာ သိက္ခာကျစရာ အရှက်ရစရာပါလား စဉ်းစားမိတယ်။
အစ်မရဲ့ ကြာသပတေးဟာ ဒီနေရာမှာ အတော် အစွမ်းပြတယ် ဆုိုရမယ်။ အစ်မဟာ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ကောင်းအောင်နေတယ်။ သူများကုိုလည်း ဘက်ပေါင်းစုံကနေ စေ့စေ့ကြည့်တယ်။ ပြောတာ၊ ဆုိုတာ သွားတာ၊ လာတာ၊ စိတ်နေသဘောထား၊ အကျင့်သိက္ခာ၊ ပရဟိတသမား ဟုတ်မဟုတ်၊ အိမ်ထောင်ကုိုရော ဘယ်လုို ဦးဆောင်မလဲ၊ သားသမီးတွေကုို ကြင်နာပါ့မလား စသည်ဖြင့်.....
အိမ်ထောင်ရေးကတော့ တစောင်းစေး နဲ့ မျက်ချေး၊ ဘယ်လုိုမှကုို စကားပြောလုို့မရတာ။ ခြေရှုတ်တာကတော့ အဆုိုးဆုံး၊ ဘယ်လုိုမှ ပြုပြင်ပေးလုို့ မရဘူး။ ခွေးမြီးကောက် ကျီတောက်စွတ် ဆုိုသလုို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပဲ။
အိမ်ထောင်ကျလုိုက်တော့ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်လုို့ ခုနက ဆုိုခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး စီးပွားအ၇မ်းတက်ပါတယ်။ နဂုိုကလည်း သူက ငွေကြေး၊ ရာထူး ရှိပြီးသားလူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ရပြီး အစ်မရဲ့ လုပ်နုိုင်ကုိုင်နုိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေ အတော်ကျဆင်း သွားတယ်။ သူ့လက်ထဲရောက်ပြီးမှ အလုိုလုိုညံ့လာသလုိုပဲ။ အဖက်ဖက်က တွေးကြည့်လုိုက်တော့ သူ့ကုို ယူတာဟာ မဟာအမှားပဲ။ ကလေးတွေနဲ့ အမြဲလုို တစ်ယောက်တည်းနေရ၊ အလုပ်ထွက်လုပ်လုို့မရ။ အိမ်ကုိုလဲ ငွေမထောက်နုိုင်၊ စိတ်ဒုက္ခရောက်လုိုက်တာ မပြောပါနဲ့။
၂၀၀၇ခုနှစ် ဇူလုိုင်လ ၁၆ရက်မှာ မမျှော်လင့်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာပေါ်တယ်။ နောက်တနေ့မှာ အစ်မ စိတ်ရောဂါ အထူးကုနဲ့ သွားတွေ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ အစ်မကျောင်းပြန်တက်တယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ အဆင်ပြေလာတယ်။
စောစောက ပြောခဲ့သလုိုပဲ။ နိစ္စဘင်္ဂရထားတဲ့ အင်္ဂါကြောင့်လား မသိ။ အစ်မခင်ပွန်းကုို ပြန်မပေါင်းတော့ဘူး။ ကနေ့ထက်တုိုင်ပဲ။ အိမ်မှာ ပြန်လာပြီး နေတယ်။ လာလုိုက် သွားလုိုက် ဒါပေမဲ့ အင်္ဂါ နိစ်ကြောင့် ဘာကုိုမဆုို အရမ်းချိန်တယ်။ ဟုိုလူ့ငဲ့ ဒီလူ့ငဲ့ နဲ့ အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ဘူး။ အစ်မအနေနဲ့ သားတွေကုို မငဲ့ပဲ ခင်ပွန်းကုို တရားစွဲရင် ငွေရနုိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ပွန်းကုို စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ရင် ကလေးတွေကုို တနေ့မှာ ပြန်ထိမယ် ဆုိုပြီး မလုပ်တာ။ နောက်တစ်ခု ရှေ့နေငှားတာ၊ တရားရုံးတက်တာ ငွေအလွန်ကုန်တဲ့ ကိစ္စ။ အစစ ပြန်ချိန်ရတယ်။ အစ်မဟာ စိတ်ညစ်တဲ့ ဒါဏ်ကုို မခံနုိုင်ဘူး။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိတုန်းက ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးကုို ရှင်းခဲ့တာ။
အခုလက်ရှိမှာ အခြေအနေက အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ငွေအတွက် စိတ်မပူရပေမဲ့ ငွေတွေကုိုင် ထင်တာလုပ်လုို့လဲ မရပြန်ဘူး။
၁၉၉၉ သြဂုတ်လကတည်းက အလုပ်ထွက်ခဲ့တာ။ အခုတော့ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပဲ ငွေက နည်းနည်းချင်းဝင်တယ်။
ကျောင်းက တစ်နှစ်ခွဲလောက်နေရင် ပြီးပြီ။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်။
ကုိုပခန်းပြောတဲ့ ရက်စွဲတွေဟာ အတော်ကုိုနီးစပ်ယုံတင် မကဘူး။ မှတ်မိသလောက်ဆုိုရင် တထပ်တည်းကျနေတယ်လုို့ ထင်တယ်။
ဆက်ရေးပြီး ပုို့လုိုက်တယ်။ တွက်ထားတာ ယူဆတာတွေဟာ တကယ်ဖြစ်တာတွေနဲ့ ဘယ်လုို တုိုက်ဆုိုင်တယ်။ ဘယ်လောက် တုိုက် ဆုိုင်တယ်ဆုိုတာ စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။
အစ်မဟာ ၆လသမီးကတည်းက အဖွားနဲ့ လျှောက်လုိုက်ရတယ်။ ရန်ကုန် မန္တလေး သွားလုိုက် လာလုိုက်၊ လုပ်လာလုိုက်ရတာ အသက် ရနှစ်ထဲမှာ ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်.။ ( ကုိုပခန်းပြောထားတဲ့ ရက်စွဲနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျပဲ)
၁၂. ၀၄. ၁၉၇၄ မှ ၁၂.၀၄.၁၉ ၈၁ (ကုိုပခန်းပြောတဲ့ နေ့စွဲ ကုို ပြန်ကြည့်ပါ)၊ ၃င်္ဂါ၊ ၅တေး၊ ၂လါ
၁၉၇၄ သင်္ကြန်မကျခင် သုို့မဟုတ် ကျပြီးခါစမှာ ရန်ကုန်ကုို အပြီးပြောင်းလာရတယ်။ ပိတောက်ပန်းတွေ၊ လူတွေရေလောင်းနေ တာတွေကုို အိမ်ဝရံတာမှာ မြင်နေရလုို့ မှတ်မိတာ။
အဲဒီ (၇) နှစ်အတွင်း အဂါင်္မကောင်းလုို့လား မသိဘူး။ မကြာခဏ အရုိုက်အနှက်ခံရတယ်။ မိဘတွေက ရုိုက်ရင် ရုိုက်၊ မရုိုက်ရင် သူများ ချောင်းရုိုက်တာကုို ခံရတယ်။ အရုိုက်ခံရတဲ့ ဒါဏ်ရာ ဒါဏ်ချက်တွေ ပြောက်ဘုို့ လနဲ့ချီ ကြာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုိုယ်က ခေါင်းမာသူဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ရုိုက်ရုိုက် မမှန်ကန်ဘူးလုို့ ယူဆထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကုို သေအောင် ရုိုက်ပေစေ။ မလုပ်ဘူး (အိမ်မှာ အရုိုက်ခံရတဲ့ ကိစ္စက ဝက်သားမစားလုို့) ။ ချောင်းအရုိုက်ခံရတာက ကျောင်းမှာ ဆရာမကုို သွားတုိုင်လုို့။
ခွေးကုိုက်ခံရဘူးတယ်။ အကြီးအကျယ်ပဲ။ အတော်ကုယူရတယ်။
ပညာရေးက အတော်ကောင်းတယ်။ တကျောင်းလုံးမှာ အတော်ဆုံး၊ တမြို့နယ်လုံးမှာ အတော်ဆုံး၊ မြို့နယ်လူရည်ခွန် ၂နှစ် ဆက်တုိုက်ရတယ်။ တုိုင်းမှာ ပြုတ်တာက ဆုိုရှယ်လစ်ခေတ်က တုိုင်းကောင်စီသမီး ကုို ရွေးလုိုက်လုို့ လုို့ ပြောကြတယ်။ ကျောင်းက ရှိသမျှ အဖွဲ့အစည်း၊ ဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အားကစားပွဲ အားလုံးကုို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ငွေဝင်အောင် ရှာတတ်တာ အသက် ၅နှစ်လောက်ကတည်းက။ ရန်ကုန်မှာ အခြေချတော့ အဖေအမေက နယ်မှာ တာဝန်ကျနေတယ်။ ငွေမပုို့ပေးနုိုင်လုို့ အဖွားနဲ့နေရင်း အလုပ်စလုပ်ရတယ်။ အဲဒါ ၁၉၇၆ လောက်ကနေ ၇၉ လောက်အထိ ထင်တယ်။ ၁၉၇၇၊ ၇၈ ကတော့ အားလုံးကုို ဦးစီးပြီး လုပ်ရတာ။ အစ်မအသက် ၁၂ နှစ် ၁၃နှစ်မှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေလေး တပါတ်ကုို ၂၅ကျပ်လောက် ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက အစုိုးရအရာရှိဖြစ်တဲ့ အဖေက လစာနဲ့ အပုိုကြေးပေါင်းတော့ ၃၀၀ လောက် ရတဲ့အချိန်။ နေ့စား ဝန်ထမ်းတွေ ၃ကျပ် ၁၅ပြား ရတဲ့အချိန်၊ အစ်မရတဲ့ ဝင်ငွေဟာ မိသားစုအတွက် အတော်အရေးပါခဲ့တယ်။
ကုိုယ့်ကုိုနားလည်သူ နည်းပါးတယ်။ ခင်မင်သူ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစ ရှိပေမဲ့ ရွယ်တူ တန်းတူတွေက ဝုိုင်းပြီး မနာလုို၊ ဒုက္ခပေးတာ များတယ်။
၁၂.၄.၁၉ ၈၁ မှ ၇.၄.၁၉၉၉ ( ၈ဟု၊ ၁နွေ၊ ၆ကြာ၊ ၄ဟူး၊ ၀နေ)
ပညာရေးထူးချွန်လုို့ ဆရာဝန်၊ သုို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်လာမယ်လုို့ အားလုံးက အားခဲထားတဲ့ အစ်မရဲ့ ရှေ့ရေးဟာ ၁၉၈၂ခုနှစ် ဧပြီလထဲမှာ ရုိုက်ချိုးခံရတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးအရင်းကုို ဘလက္ကာရ ပြုဘုို့ ကြိုးစားတာ။ အမှုဖြစ်တာဟာ ၁၂.၄.၁၉၈၂ ဒါမှမဟုတ် သင်္ကြန်ရက်နားမှာလုို့ ထင်တယ်။ ကြိုးစားမှုဟာ မအောင်မြင်ဘူး။ အစ်မက အကြီးအကျယ် ပြန်ခုခံပြီး အိမ်က ထွက်ပြေးပြီး အဖွားနဲ့ အမေကုို တုိုင်လုို့ အမှုက ရဲစခန်း ရောက်သွားတယ်။ အရှက်ကွဲပုံကတော့ မပြောပါနဲ့တော့.ကျောင်း၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ် ဟုိုးလေးတကျော်ပဲ။ ဆွေမျိုးနီးစပ်ထဲက သတင်းလုိုက်ဖြန့်ကြတာ။
အမှုစစ်တာ ၁နှစ်ခွဲလောက်ကြာတယ်။ မိသားစုအရေး၊ အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရေး ဖြစ်နေလုို့ အမှုကုို တံခါးပိတ်ပြီးစစ်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး အစ်မက ကျေအေးပေးပေမဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားလုို့ အဖေ ထောင် ၃နှစ် ကျသွားတယ်။ အစ်မက အမှုဖြစ်ပြီး သိတ်မကြာခင် အဖေ့အမျိုးတွေ နေတဲ့ နယ်မြို့တစ်မြို့ကုို သွားပြီး ကျောင်းတက်ရတယ်။
အဒေါ်အိမ်မှာ ကျောင်းတက်တော့ စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်း၊ အတုိုက်အခုိုက် များလုိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ ဒုက္ခတွေကြားထဲက စန်း အရမ်းပွင့်လုို့ အပြင်ကုို တစ်ယောက်ထဲ လုံးဝထွက်လုို့မရဘူး။ အန္တရာယ်တွေ ပါတ်လည်ဝုိုင်းနေတယ်။ ၁၉၈၃ လား ၁၉ ၈၄ လား မမှတ်မိတော့ဘူး။ ရေနစ်တယ်...သေမယ်လုို့ထင်တာ အောက်မှာ ကျေက်အငူတစ်ခုကုို ထောက်မိလုို့ မသေဘူး.
(၁၀)တန်းကုို ၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ ၃၀၁ မှတ်နဲ့ အောင်တယ်။ အမှတ်က သိပ္ဗံလုိုင်းကုို ဝင်တယ်. ၁၀တန်းအောင်ပြီး ၁၉၈၄ စက်တင်္ဘာနောက်ပုိုင်းမှာ စေ့စပ်ကြောင်း လမ်းသူ ပေါ်လာတယ်။ အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မုဆုိုးဖုို။ အသက်ငယ်သေးလုို့ အိမ်ထောင်မပြုချင်ပေမဲ့ သေလုဆဲ ဖြစ်နေတဲ့ အဒေါ်ရဲ့ ဆန္ဒကုို ထောက်ထားပြီး လက်ခံလုိုက်တယ်။ အားလုံးပြောဆုိုပြီးပြီ။ အဲဒီလူက ရေရေမွန်မွန် ရှိတယ်။ စိတ်ကောင်းလဲ ရှိပုံရတယ်။ တရားဝင် ကြောင်းလမ်းတဲ့နေ့မှာ အစ်မ အစ်ကုိုတစ်ဝမ်းကွဲ ရောက်လာပြီး ရသင့်ရထုိုက်တာတွေကုို စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ပေးရမယ်လုို့ ပြောတော့ စေ့စပ်ပွဲ ပျက်သွားတယ်။
၁၉၈၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းစတက်ရတယ်။ အဲဒီကစပြီး ငွေကြေး၊ မိသားစုအရေး၊ ညီအစ်ကုို မောင်နှစ်မများအရေး ထောင့် စုံအောင် တာဝန်ကြေအောင် လုပ်ပေးနုိုင်လာတယ်။ အရာရှိတွေ တလ ၂၁၀ ရတဲ့ခေတ်မှာ အစ်မ ဝင်ငွေက ၃၅၀ လောက် ရှိတယ်။ အလုပ်က ၂ခု။ ၂ခုလုံးက စာရေးစာချီအလုပ်ပါ။
အချစ်ရေးဟာ မအောင်မြင်ဘူး။ ချစ်သူဟာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ကုိုယ့်ရဲ့အရာရှိ၊ ကုိုယ့်ကုို ဖခင်တစ်ယောက်လုို အုပ်ချုပ်သူ၊ လွှမ်းမုိုးထား သူ၊ အလွန်ရှုတ်ပွေသူ ဖြစ်နေတာ တဖြေးဖြေး သိလာရလုို့ နောက်ဆုတ်လုိုက်ရတယ်။ စုစုပေါင်း ၇နှစ်ကြာခဲ့တဲ့ အဲဒီအလုပ်ကနေ ၁၉၉၀ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ကုန်မှာ နှုတ်ထွက်ပြီး ၁၉၉၁ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလထဲမှာ ရန်ကုန်မြို့က နာမည်ကြီး စတုိုးဆုိုင်ကြီးတစ်ခုမှာ အလုပ်ရတယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်ဟာ နှစ်ရှည်လများ အလုပ်ထွက်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အကောင်အထည်ပေါ်သွားတဲ့နှစ်။
ဝင်တဲ့အလုပ်သစ်မှာ ဝင်ငွေပုိုကောင်းသလုို စိတ်လဲ ပုိုချမ်းသာလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မမျှော်လင့်တာတွေ ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာ မထားပဲ မကျွမ်းကျင်တဲ့ နေရာကုို ပုို့လုိုက်တော့ ရေရှည် ဆက်မလုပ်နုိုင်တော့ဘူး။ ၁၉၉၂ မတ်လဆန်းမှာ အနားယူမယ်ပြောပြီး အလုပ်ပြန်မသွားတော့ဘူး။ အလုပ်ရှင်က ပြန်လာစေချင်တယ်။
၁၉၉၂ ဧပြီလမှာ လူနာအဆောင်မှုးအဖြစ် အလုပ်ပြန်ရတယ်။ အဲဒီရတဲ့ အလုပ်မှာ အနောက်တုိုင်းသားတွေနဲ့ စတင် အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ဝင်ငွေက ဆေးရုံအုပ်ထက် ကောင်းတော့ အလုပ်ထဲမှာ ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ မနာလုိုသူ အရမ်းပေါတယ်။ အဲဒီအလုပ်ထဲကနေ အဆုိုးတွေရော အကောင်းတွေရော အစ်မဘဝကုို သယ်လာပေးတာပဲ။
၁၉၉၃ခုနှစ် ဧပြီလနောက်ပုိုင်းမှာ ကားတင်ခံရခြင်းဟာ မနာလုိုသူတွေက ဝုိုင်းဝန်းသွေးဆောင်ပေးလုို့ ဖြစ်လာရတာ။ လမ်းမှာ သတိလစ်နေရာကနေ ပြန်လည် လာတော့ မလုိုက်ဘူးပြောလုို့ ကားထဲကနေဆွဲထုတ်၊ တောင်ကုန်းပေါ် ခေါ်သွားပြီး ဒါးနဲ့ ထုိုးမယ် လုပ်တယ်။ သေမှာ ကြောက်လုို့ လုိုက်သွားရတယ်။ ၁၆ ရက်အကြာမှာ ပြန်ထွက်ပြေးလာတယ်။ အလုပ်ပြန်ဝင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်လုပ်ရတာ မပျော်တောဘူး။ ၁၉၉၅ မတ်လမှာ အလုပ်ထွက်တယ်။ ၁၉၉၅ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးဟာ အဆင်မပြေတဲ့နှစ်၊ ဒုက္ခအလွန်ရောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ငွေကြေး၊ အလုပ်အကုိုင် အစစအရာရာပဲ။ ကောင်းတာတစ်ခုက အဲဒီနှစ်မှာ အစ်မဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကုို ရောက်လာတယ်။
(အကြားအမြင်ရတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က လက်ရှိနေတဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ အင်းမြှုပ်ထားတယ်။ အဲဒီအိမ်ကနေ ပြောင်းရင် ချက်ချင်း ကောင်းလာမယ် ပြောလုို့ ပြောင်းပြီးပြီးချင်း အလုပ်သစ်ရတာပဲ။) အလုပ်သစ်ကုို ၁၉၉၆ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ လလယ်လောက်မှာ ဝင်ရတယ်။ အဲဒီရတဲ့ အလုပ်သစ်ဟာ အခုလက်ရှိ ဘဝအခြေအနေကုို ရောက်လာဘုို့ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ လှေခါးထစ်ဆုိုပါစုို့။
အထက်ပါအဟောများအပေါ်တွင် အကြံပေးသူ အမြင်ရှင်းလင်းပေးသူ ဆရာများအား မျှော်လင့်လျှက်ရှိပါသည်။
ကိုပခန်းရေ.. မွေးနေ့ အနေနဲ့ အများကို ကူညီပေးတဲ့ အတွက်က သာဓု..သာဓု..သာဓု ပါဗျား။
စစ်ဆေးပုံလေးကို ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေနဲ့ bold လုပ်သင့်တာ လုပ်ပြီး အပိုင်းလိုက် ခွဲပြီး..ဖေါ်ပြပေးယင် ဖတ်ရတာ ပိုရှင်းသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်လေးများ ခွဲခြားလိုက်ကြောင်းပါခင်ဗျ။ အရာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဆရာခင်ဗျား။
ဇာတ်လမ်းတပုဒ် ဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ။ ဘဝက ခါးလိုက်တာနော်။ မုဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ ဆိုသလိုပဲ တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်။ ဒါကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ခုထိ ဘဝကို အညံ့မခံဘဲ ကြိုးစားနေလာနိုင်တဲ့ အစ်မကို လေးစားတယ်။ ချီးကျူးတယ်။ အစ်မနေရာဆို ငယ်လေးတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပြီးလောက်ပြီ။ အဲလောက်ကြီး ခံနိုင်ရည် မရှိဘူး။ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးတွေပေါ့နော်။
ချစ်မေတ္တာတော့ ပုိုပါတယ် မောင့်ကုို said...
အမှန်တော့ ဒီထက်ဆုိုးတဲ့ ဘဝတွေ ရှိကြမှာပါ။ါးပေမဲ့ ပြောခွင့်မရကြတာ၊ ပြောရမှာ ရှက်တာ၊ ပြန်လှန်တွန်းလှန်ပြီး ရဲရဲတုိုက်ပွဲ မဝင်နုိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့် လူမသိ သူမသိ ဘဝနဲ့ နိဂုံးချုပ်ကြရတာတွေ အများကြီးပါ။
အွန်လိုင်းမှာမှ မှတ်သားစရာ ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီးကြုံရ ကြားရ စစ်ဆေးရပါတယ်။ အွန်လိုင်းကရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်။ မွေးနေ့မဖေါ်ပြသော်လည်း အကြောင်းအရာတွေက အဆိုပါဇာတာရှင်ကို ဖေါ်ပြနေသလို သိသာမှာမို့ လောလောဆယ်ဖေါ်ပြလို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ (ဖေါ်ပြခွင့်တောင်းလို့လည်း မသင့်တာတွေမို့ပါ။) နောက်နောင် အချိန်တွေအရမ်းကြာလာရင်တော့ စုစုစည်းစည်းဖေါ်ပြဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်ဆိုသလို လောကကြီးကလည်း ဆန်းပြားကြပါတယ်။ ထို့နည်းတူစွာ နက္ခတ်ဗေဒင်ကလည်း ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင် နက်ရှိုင်းလျှက်ပါ။